Hiroshi Lockheimer, Android နှင့် Chrome ၏ခေါင်းဆောင်အသစ် | Androidsis ပါ
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကဂူးဂဲလ်သည်သုံးစွဲသူများကိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အခြေခံအဆောက်အအုံအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အရေးအကြီးဆုံးသောကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဤအခြေခံအဆောက်အအုံအသစ်သည်ဂူဂဲလ်အပါအ ၀ င်လက်ရှိ Mountain View ကုမ္ပဏီ၏ကုမ္ပဏီအားလုံး၏ဖခင် Alphabet နှင့်စတင်ခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဂူဂဲလ်အတွင်းပြောင်းလဲမှုအသစ်များကိုခဏတာနားထောင်ပေးမှာပါ၊ အကြောင်းမှာဂူဂဲလ်တွင်အခြားနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကမ္ဘာနှင့်အ ၀ ှမ်းလူသိများသော Android နှင့် ChromeOS ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ Android နှင့် Chrome ၏အကြီးအကဲဖြစ်သော Sundar Pichai ကို Google ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းအားမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရလျှင်၊ ဟီရိုရှီးမား lockheimer.
ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များရှိသည့် Sundar သည် Android နှင့် Chrome တို့ကိုတဖြည်းဖြည်းနှင့်ပေါင်းစည်းရန်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် platform နှစ်ခုလုံးအကြားတွင်ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုရရန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသေးသည်။ Sundar သည်ယခုအချိန်အထိ Android နှင့် Chrome (ChromeOS, Chromecast, etc) နှင့်ဆက်စပ်နေသောအရာအားလုံးသည်ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ပြီး Alphabet, Larry Page နှင့် Sergey Brin တို့၏အကြီးအကဲများက Be ​​the ဖြစ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Google ၏ CEO
ဒါကြောင့်သူ့အရင်အလုပ်ဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့ပြီဆိုတာငါတို့တွေ့ပြီ။ Hiroshi Lockeimer သည် Android နှင့် Chrome ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အရာအားလုံးကို ဦး စီးသူအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Sundar နှင့်အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုစလုံးတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပြောင်းအလဲများကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
Hiroshi Lockeimer သည် Android နှင့် Chrome သို့ဘာတွေယူဆောင်လာနိုင်သနည်း။
ကောင်းပြီ၊ ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာဆက်ရှိနေဖို့နဲ့ operating system နှစ်ခုလုံးမှာတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတိုးတက်ဖို့ပါ။ စတင်ရန်ဟီရိုရှီနှင့်သူ၏အဖွဲ့သည် Android နှင့် Android ကိုဆက်လက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် မိုဘိုင်း operating system နှင့် desktop operating system အကြားရှိပေါင်းစည်းမှုကိုဆက်လက်ချဲ့ထွင်ရန်, ChromeOS ။ ဤအချက်သည်တိကျစွာဤအချက်သည်လာမည့် Android ဗားရှင်း၏ထူးခြားသောအသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်းအကြားပေါင်းစည်းမှုသည်လာမည့်နှစ်များအတွင်းအင်အားအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ Continuum နှင့်အတူအားသာချက်တစ်ခု။
ထို့အပြင်၎င်းသည် Android နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုပါဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Android အတွက် Work, Android One, Android Auto, Android Wear၊ ​​အနာဂတ် Nexus ထုတ်ကုန်များနှင့် Android သို့မဟုတ် Chrome နှင့်သက်ဆိုင်သောစီမံကိန်းများ၏ရှည်လျားသောစာရင်းများမှသတင်းများကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်အတွက်မြင်သည်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၊ ထို့ကြောင့်ဟီရိုရှီသည်ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးယူမည့်လမ်းကြောင်းအသစ်ကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ပြီးတော့သင်, ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုမျိုးကို Android နဲ့ ChromeOS မှာလုပ်မှာလဲ ? operating system နှစ်ခုအကြား convergence တစ်ခုကိုမြင်ချင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Android နှင့် Chrome ၏အကြီးအကဲသစ် Hiroshi Lockheimer
အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းကိုရွေးချယ်ရန်သော့ ၃ ခု